Wasiirada xukuumada cusub ee la soo dhisayo oo loogu baaqay inay shacabka Banaadir dhex degaan – Radio Daljir
Diseembar 26, 2013 1:51 b 0
Muqdisho, December 26, 2013 – Maamulka gobolka banaadir ayaa ku baraarujinaya madaxda dowladda Soomaaliya in ay ka soo guuraan xaruunta madaxtooyada oo ay la soo degaan shacabka iyo degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa ka hadlay deegaanka wasiiradda dowladda Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ku kooban xaruunta madaxtooyada villa Soomaaliya.
?Wasiiradii hore waxay ahaayeen kuwo degan madaxtooyada, wasiirku shacabka ayuu wasiir u yahay waa inuu la degaa hadii kale wuxuu noqonayaa keligii wasiir.? Ayuu yiri Tarsan
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa beeniyey warar sheegaya inaan la isku halayn karin amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka qaar oo inta badan laga cabsado, wuxuu tilmaamay in amniga guud ahaan degmooyinka uu yahay mid haboon
?Waxaan maqlay in wasiirada cusub ay noqon doonaan 25 wasiir, 25 ku xigeen iyo 6 wasiir dowle. Waxaan leeyahay madaxtooyada ha isku koobinina.? Tarsan ayaa sidaas sheegay mar uu baaq u jeediyey xukuumada cusub
Maamulka gobolka Banaadir ayaa hadda ka hor ugu baaqay Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed inay degaan qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir, xildhibaanada ayaa haatan degan dhowr degmo oo ka tirsan caasimada.